Ryan Giggs oo talo usoo jeediyey xulka aafada aaneysay ee Ingiriiska isaga oo farta ugu fiiqay shaqsiga ku.. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Ryan Giggs oo talo usoo jeediyey xulka aafada aaneysay ee Ingiriiska isaga oo farta ugu fiiqay shaqsiga ku..
Ryan Giggs oo talo usoo jeediyey xulka aafada aaneysay ee Ingiriiska isaga oo farta ugu fiiqay shaqsiga ku..
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 1-07-16 10:20 AM Isbuucyo adag ayey marayaan taageereyaasha xulka England. Sababta ugu horreysa ayaa ah inay Euro 2016 uga soo hareen gacmaha xulka yar ee Iceland, ka dibna tababare Roy Hodgson ayaa iska casilay shaqada.
Madaxda Xiriirka Kubadda Cagta Ingiriiska ee FA-ga loo garan ogyahay ayaana haatan raadinaya tababare cusub oo xulka England hogaamiya. Tiro macalimiin ah ayaana durba lala xiriirinayaa, waxaana hogaaminayey Gareth Southgate oo maamula juunyarta xulka England.
Si kastaba ha ahaatee, tababarihii hore ee Middlesbrough ayaa iska diiday maamulka xulka koowaad ee Ingiriiska maadaama uu sheegay inuu u baahan yahay inuu khibrad dheeraad ah usoo yeesho xilkaan.
Halyeeyga reer Wales isla markaana 29ka sanno usoo shaqeynayey Manchester United Ryan Giggs ayaana aragtidiisa ku biirayey arrinka ku aadan soo xulashada tababaraha ugu habboon ee xulka England guulo ku hogaamin kara mustaqbalka.
Giggs oo Khamiistii ka mid ahaa halyeeyo ITV ka fallanqeynayey ciyaartii u dhexeysay xulalka Poland iyo Portugal ee tartanka Euro 2016 ayaa soo jeediyey inuu Louis van Gaal yahay shaqsiga ugu habbon ee maamuli kara xulka England, waxaana xusid mudan inuu ninka reer Holland laba sanno caawiye ugu soo ahaa kooxda ka dhisan Old Trafford ka hor inta aan shaqada laga raacdeyn.
Si kastaba ha ahaatee, England oo markaan dooneysa inay tijaabiso tababare ajnabi ah ma laga yaabaa inay u weecato LVG kaasoo laba xilli ciyaareed oo xun ku qaatay Red Devils?